Akadeemiye-Goboleedka (AGA) oo ka Tacsiyaysay Geerida ku timid Mulaxamiiste Cabdi-kariin Jiir! - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Wararka AGA Akadeemiye-Goboleedka (AGA) oo ka Tacsiyaysay Geerida ku timid Mulaxamiiste Cabdi-kariin Jiir!
Akadeemiye-Goboleedka (AGA) oo ka Tacsiyaysay Geerida ku timid Mulaxamiiste Cabdi-kariin Jiir!
Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga (AGA) ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee, Marxuum Cabdi-kariin Faarax Qaarey (Jiir) oo maanta oo ku beegan 13/2/2022 ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
“Innaa lillaahi, wa Innaa Ileyhi raajicuun. Waxa aan tacsi u diraynaa qoyska, qaraabada iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee, Marxuum Cabdi-kariin (Jiir) oo ka mid ahaa bahda hobollada Waaberi ee fanka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta AGA.
Akadeemiyada AGA ayaa Marxuumka Alle uga baridey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyska, ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Marxuumka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay, waxa uu ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho, wuxuuna saakay ku geeriyooday isbitaalka Digfeer.
Marxuum Cabdi-kariin Faarax Qaarey (Jiir) ayaa waxaa lagu xasuustaa inuu lahaa mulaxanka heeso badan oo caan ah, kuwaasi oo ay ku luuqeeyeen fanaaniin ay ka mid yihiin Xasan Aadan Samatar, Xaliimo Khaliif Magool iyo kuwa kale oo badan.